Chidzidzo cheHarvard: COVID-19 vaccine 'side effects' iri mupfungwa dzako
Location: musha » Kutumira » utano » Chidzidzo cheHarvard: COVID-19 vaccine 'side effects' iri mupfungwa dzako
Masayendisiti anobva kuBoston-based Beth Israel Deaconess Medical Center akasvika pakugumisa kuti iyo inonzi 'nocebo effect' - manzwiro asingafadzi anokonzerwa nekufunganya kana tarisiro dzakaipa - akaverengera zvikamu zvitatu muzvina zvezvose zvakashumwa zvinokonzerwa nemishonga.
Mushure mekuongorora mishumo yevanopfuura 45,000 vatori vechikamu vekiriniki yekuedzwa, Harvard Medical School vaongorori vakati kuwanda kwe Mushonga unobetsera kudzivirira covid-19 'maside effects' ayo vanhu vanoti vanosangana nawo mushure mejab, zvichikonzerwa nezvinotarisirwa nevanhu kwete nemishonga.
Vanhu vakawanda vari kunetsekana nazvo Mushonga unobetsera kudzivirira covid-19 'maside effects' vanovanzwa kunyangwe vakawana placebo, tsvagiridzo itsva inoratidza.
Yakasiyana-siyana 'systemic' mhedzisiro, sekutemwa nemusoro, kuneta, uye kurwadziwa kwemajoini zvakashumwa mumahafu ese eboka rekutsvagisa: nevaya vakagamuchira akasiyana eCCIDID-19 ekudzivirira, uye neavo vakagamuchira placebo nekusaziva.
Mushure mekuongorora mishumo, masayendisiti kubva kuBoston-based Beth Israel Deaconess Medical Center akasvika pamhedziso yekuti iyo inodaidzwa kuti 'nocebo effect' - manzwiro asingafadzi anokonzerwa nekufunganya kana tarisiro yakaipa - yakaverengera zvikamu zvitatu muzvina zvezvose zvakashumwa zvinokonzerwa nemishonga.
Chirevo, icho chakabudiswa mumagazini yeJAMA Network Open, inoti 35% yevakagamuchira placebo vakashuma migumisiro mushure mekutanga dosi uye 32% mushure mechipiri. Zvakanyanya kukosha "zviitiko zvakashata" (AEs) zvakataurwa mumapoka ekudzivirira, asi anonzi "nocebo mhinduro" akaverengera "76% ye systemic AEs mushure mekutanga. Mushonga unobetsera kudzivirira covid-19 dose uye 52% mushure mepiritsi yechipiri.
Masayendisiti anocherekedza kuti, kunyangwe zvikonzero zvekuzeza kwekudzivirira "zvakasiyana uye zvakaoma," kunetseka pamusoro pezvinogona kuitika kubva Mishonga inobetsera kudzivirira covid-19 "zvinoita senge chinhu chikuru" uye "zvirongwa zvekudzivirira veruzhinji zvinofanirwa kufunga nezvemhinduro idzi dzakakwirira dzenocebo."
Mumwe Harvard Medical School mapurofesa ane chekuita nekutsvagisa, akatsanangura sainzi kuseri kwe "nocebo mhedzisiro," achiratidza kuti "zvisina kujeka zviratidzo," semusoro uye kuneta, zvakanyorwa mumabhuku akawanda eruzivo seyakajairika mhedzisiro yeCCIDID-19 vaccine.
"Uchapupu hunoratidza kuti ruzivo rwerudzi urwu runogona kuita kuti vanhu vataure zvisiri izvo zvinowanzoitika zuva nezuva manzwiro anobva mujekiseni kana kukonzera kushushikana uye kunetseka kunoita kuti vanhu vangwarire manzwiro emuviri nezvezviitiko zvakaipa," akadaro.
Rwanda New Official Decree neWildlife Conservation Society
Cathay Pacific vashandi vakasungwa muHong Kong nekuda kwekutyorwa kweCOVID-19
Electromyography Devices Market In-deep Analysis...
Ndira 23, 2022 pa23: 03
Nyarai vanhu imi! Kana mumwe munhu akafa uye akakuvara nekuti vanonyengerwa zvekuti vatende ropa rako rekudzidza riri muruoko rwako!
Ndira 22, 2022 pa00: 16
Chidzidzo ichi chinofanira kubhadharwa neBig Farma Shamwari yangu yakafa maminetsi gumi mushure mePfizer
Ndira 21, 2022 pa03: 50
Pane kuneta kwakapfava uye kune munhu asingagone kurara masikati akagogodzwa muflat uye akarara kwemazuva maviri akatwasuka. Ndinofungidzira kuti chidzidzo cheDeaconess chingati 102 fever uye kudedera zvinongori zvekufungidzira, handiti?
Vakadzi vanoita zvakawanda kupfuura varume. Vakadzi vanongopenga here? Kwete Estrogen is immune response stimulator uye testosterone inodzvinyirira maitiro ezvirwere zvemuviri.
Ndira 20, 2022 pa17: 44
Chidzidzo ichi chinopokana neCDC pachayo data uye mishumo yeVAERS. Izvo zvakare zvinopesana nedzimwe data kutenderera pasirese, kusanganisira iyo UK's Yellow Card System.